TSMC Profit Rekodhi pane Kudiwa kweiyo iPhone 7 uye A10 Fusion | IPhone nhau
TSMC inodambura purofiti nekuda kwekuda kwakanyanya kweApple 7
Gore rino, Apple yakaratidza chikamu chekota chakange chiri chekutanga kuzivisa kuderera kwekutengesa kwe iPhone kubva 2007, gore rekutanga kwechizvarwa chekutanga cheapuro smartphone. Vaongorori vaive vasina tarisiro kwazvo nezve kuvhurwa kweiyo iPhone 7, asi vese vatengesi vane chekuita neApple yazvino smartphone vari kuratidza kuti kutengesa kuri kuita zvirinani pane zvaitarisirwa. Kambani yekupedzisira mu funga izvi yave iri TSMC, mugadziri wega we A10 Fusion processor yeiyo iPhone 7.
TSMC yaifanira kurwisa zino nembambo kuti ive yega mutengesi wechinhu ichi. Muna 2015, Taiwan Semiconductor Kugadzira Kambani inogadzira hafu yea processor eA9, nepo Samsung yakaburitsa imwe hafu. Zvino, iine iPhone 7 yatotengeswa, zvakaratidzwa kuti kuedza kwainge kwakakodzera: TSMC yakaratidza chiyero nevamwe rekodhi purofiti mukambani yeTaiwanese, kunyanya nekuda kweiyo A10 Fusion yeiyo iPhone 7.
TSMC ndiyo yega inogadzira iyo A10 Fusion
TSMC haina kupa zvakawanda, asi yakati inotarisira a purofiti kukura pakati pe11-12%, iyo inodarika iyo 5-10% pakutanga yakarongwa. Zvichienzaniswa nekota yechitatu, kambani yakawana 23% kuwedzera kuti isvike purofiti yakazara ye260.400 bhiriyoni TWD (ingangoita 7.455 mamirioni emaEuro).
Iyi data yeTSMC inowedzerwa kune yea vashandisi kubva kuUnited States, uyo zvakare vaiti vanorova rekodhi kutengesa kweiyo iPhone pakuvhurwa kwayo. Apple haina kupa kana kupa data rekutengesa kweiyo kuvhurwa kwevhiki, saka zvinoita sekunge tichazomirira kusvika Ndira kuti tizive kana rekodhi rakatyorwa kana kwete.
Vaongorori vanoti iyo iPhone 7 ichatengesa zvakanyanya kana kushoma seiyo iPhone 6, iyo iPhone iyo parizvino inobata Apple rekodhi-ichipaza kutengesa kwe smartphone. Chero zvazvingava, zvinoita sekudaro zvinhu hazvina kushata zvakanyanya sezvaitarisirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » TSMC inodambura purofiti nekuda kwekuda kwakanyanya kweApple 7
Apple inogadziridza inozivikanwa Apple Store paRegent Street muLondon
Yazvino yekuvandudza yeApple app inotibvumidza kutumira mavhidhiyo kuApple TV